အောင်အောင်(မကစ)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Maleဒီပဲယင်းMyanmar Like0members like this
ဘလော့များ (38)ဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများ (31)Photo Albumsဗွီဒီယိုများ အောင်အောင်(မကစ)'s Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
♣တောသူမလေး♣ leftacomment for အောင်အောင်(မကစ)"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း…"Mar 22dimplemit leftacomment for အောင်အောင်(မကစ)"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…"Mar 22ကသစ် commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'ယောဆရာတော် အရှင် သိရိန္ဒာဘိဝံသ၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"အားကျအတုယူစရာကောင်းပါဧ။်"Jan 22hninwarnyo liked အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'ဆရာတော်ကြီးများနှင့် ပညာရှိများ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ စာပေများ (၅)'Sep 23, 2012zin mar win commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'ယောဆရာတော် အရှင် သိရိန္ဒာဘိဝံသ၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"SARDU SARDU SARDU"Aug 27, 2012kalatwai5 liked အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'ယောဆရာတော် အရှင် သိရိန္ဒာဘိဝံသ၏ထေရုပ္ပတ္တိ'Aug 17, 2012အောင်အောင်(မကစ) posted blog postsယောဆရာတော် အရှင် သိရိန္ဒာဘိဝံသ၏ထေရုပ္ပတ္တိရဝေထွန်း(ဘဒ္ဒန္တ တိလောကသာရ)၏ထေရုပ္ပတ္တိAug 14, 2012အရှင်အာစိဏ္ဏ commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'မုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ'Aug 14, 2012အောင်အောင်(မကစ) posted blog postsမဟာရတနာကရဆရာတော် ( ၉၇ဝ ခန့်-၁ဝ၅ဝ ခန့် )၏ထေရုပ္ပတ္တိမဟာစည်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိAug 11, 2012hla moe 24 commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'အရှင် မေတ္တာစာရ၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"Aug 8, 2012htin lin thar commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'မုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"thanks"Aug 7, 2012wunnatun commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'မုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"ကျေးဇူတင်ပါတယ်..............။"Aug 7, 2012Than Than Nu liked အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'မုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ'Aug 7, 2012zin mar win commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'မုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"sardu sardu sardu"Aug 7, 2012နီစံ (အနီ) commented on အောင်အောင်(မကစ)'s blog post 'မုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိ'"ဖတ်ခွင့်ရတာ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"Aug 7, 2012အောင်အောင်(မကစ) posted blog postsမုံလယ်ဆရာတော်၏ထေရုပ္ပတ္တိအရှင် မေတ္တာစာရ၏ထေရုပ္ပတ္တိAug 7, 2012 More... RSS
ဒီဘလော့ကို August 13, 2012 တွင်7:33pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ယောဆရာတော် အရှင် သိရိန္ဒာဘိဝံသ၏ထေရုပ္ပတ္တိ
ဒီဘလော့ကို August 13, 2012 တွင်7:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... မဟာရတနာကရဆရာတော် ( ၉၇ဝ ခန့်-၁ဝ၅ဝ ခန့် )၏ထေရုပ္ပတ္တိ
ဒီဘလော့ကို August 10, 2012 တွင်8:48pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
မဟာရတနာကရဆရာတော်သည် သာလွန်မင်းတရား လက်ထက်တွင် ထင်ရှားသော ဆရာတော်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့မည်မှာ သျှင်သဒ္ဓမ္မာလင်္ကာရ ဖြစ်၏။ ငယ်စဉ်က ဆင်ဦးဘုရင် ဆရာတော်ထံတွင် စာပေများကို သင်ကြားရ၏။ ဆင်ဦိးဘုရင်ဆရာတော်သည် တောင်ငူ၌…
ဒီဘလော့ကို August 10, 2012 တွင်8:46pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (3 comments)
1:08pm အချိန်March 22, 2013, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
12:18am အချိန်March 22, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
Friends18.com Happy Birthday Scraps 2:42am အချိန်July 5, 2012, တွင်Mrs Stella Kwale မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Good Day,
Mrs Stella. မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
moh moh ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Kyi Maung ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Thet Thet Oo ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”
ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ
ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ
ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား
ရဟန္တာဖြစ်လျက် ဆွမ်းတစ်နပ်မှ ၀အောင် မဘုန်းပေးရခြင်း အကြောင်း။
Top News · Everything Kyi Maung commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏၊"18 minutes agodimplemit commented on မူကြိုဆရာ's blog post '“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”'"ဒီဘလော့သည် ကိုသောင်းတန်တင်ထားသောပိုစ့်နှင့်(၂၀ရက်ရက်စွဲဖြင့်)ထပ်တူဖြစ်နေပါသည်။ စည်းကမ်းချက်အရ…"58 minutes agodimplemit liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်'1 hour agodimplemit commented on thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'"ကျေးဇူးအထူးပါ။"1 hour agodimplemit liked thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'1 hour agothein wai postedablog postလက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ကြားမှာ မိဘက သားသမီး ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သားသမီးက မိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တပည့်က…See More2 hours ago 1
padout liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'3 hours agothein wai shared their blog post on Facebookသာသနာကွယ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍4 hours agothein wai shared their blog post on Facebookလူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။4 hours agoဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"4 hours agoဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'"လူ့ လောကထဲမှာ တော့ ဘာကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှ ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်တကယ်ချမ်းသာမရှိလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါသည်."4 hours agoမူကြိုဆရာ posted blog posts“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်3 more…5 hours ago More... RSS